Aung Myin — Online Learning
ကာလပတ်လုံးတစ်နေ့ တစ်နေ့ မရိုးနိုင်တဲ့
အလုပ် တာဝန်များစွာကို လုပ်နေကြရပါတယ်…
ပိုက်ဆံရှာတဲ့ လုပ်ငန်း တာဝန်မှ အလုပ်
အိမ်သန့်ရှင်းရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး စတဲ့အလုပ်
များပြားလှတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေကို တစ်နေ့တာ
၂၄- နာရီ ကာလ ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်နေရတာပါ။
ဒါဆို နေ့စဉ်လုပ်ရမယ့် အလုပ်တာဝန်တွေကြားမှာ
ကိုယ်လုပ်ရမည့် အလုပ်တွေကို လွယ်လင့်တကူ
ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
၂၄ နာရီမှာ အိပ်ချိန် ၈ နာရီ ကိုဖယ်ပြီး
ကျန်တဲ့ ၁၆ နာရီမှာ
👉အလုပ်တွေ ရှုပ်နေသလား ??
👉အရှုပ်တွေ လုပ်နေသလား ??
ဒီနေရာမှာ လေ့လာကြည့်ရအောင် …
👉”အလုပ် တစ်ခုလုပ်ရင် စဉ်းစားပြီးမှ
သေချာ ရှေ့နောက် အကျိုး အကြောင်း
စဉ်းစားပြီး Plan ချပြီးမှ လုပ်သလား?
ဒီလိုပဲ ပြီးပြီးရော လုပ်လိုက်သလား ?
ပြီးပြီးရော လုပ်လိုက်တာများတယ် မဟုတ်လား …
ဒါဆိုရင်တော့ Hard Work ပေါ။့
Hard work ဆိုတာ “Do, don’t think”,
မစဉ်းစားဘဲ အရင်လုပ်တာလို့ ဆိုလိုတာပါ။
အချိန်ကုန် လူပန်းခံပြီး အလုပ်တွေ လုပ်ပြီးမှ
တော့ သဲထဲ ရေသွန်သလိုပဲပေါ့ဗျာ…
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ အလုပ်လုပ်တဲ့
နေရာမှာ မလုပ်ခင်သေချာ စဉ်းစားရပါမယ်။
စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို စဉ်းစားသင့်ပါတယ် …
ဒီလို အရင် စဉ်းစားပြီးမှ လုပ်သင့်တာကို
လုပ်တာကို Smart Work လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Smart work ဆိုတာ… “Think first, and do”,
အရင်စဉ်းစားပါ၊ ပြီးမှ လုပ်သင့်တာလုပ်ပါလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
မလုပ်ခင် သေချာစဉ်းစားပြီးမှ လုပ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့
လုပ်ငန်း တာဝန်တွေ မှန်မှန်ကန်ကန် မြန်မြန်
လေးထောင့် ရာဘာတုံးကြီးတစ်တုံးကို မိုင် ၁၀၀
ဝေးတဲ့နေရာကို အမြန်ဆုံးသယ်ရမယ် ဆိုပါစို့
👉အလုံးဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့နေရာကို
သေချာတယ် Hard Work သမားက တွေးမနေဘူး
သယ်ဆို သယ်မှာပဲ မြန်မြန်ရောက်ပြီးရောမလား …
Smart Work သမားကတော့ အလုံးဖြစ်အောင်
ဒါဆို ဒီနေရာမှာ တစ်ခုတွေးစရာ ရှိသွားပြန်ပြီ …
⬛️လေးထောင့်ကို ရာဘာလုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့ ဘာလိုလဲ?
ဓားလိုမျိုး လက်နက်ကိရိယာ တစ်ခုတော့လိုမယ်
အဲ့လိုပဲ Smart Work ဖြစ်အောင် လုပ်ချင်တယ်ဆို
” ပညာ”ဆိုတဲ့ လက်နက်ကိရိယာလေး တစ်ခုတော့
ခေတ်စနစ် နည်းပညာ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတာနဲ့
အမျှ အမြဲ စောင့်ကြည့် လေ့လာနေဖို့ လိုပါတယ်။
ဒါမှလည်း အရှုပ်တွေ မလုပ်မိမှာပေါ့ …
အလုပ်ကို စနစ်တကျနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြီးမြောက်
ကြောင့် အားလပ်ချိန် ပိုမိုရရှိပြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်
အချိန်မှာ အနာဂတ် တက်လမ်းအတွက် လိုအပ်တဲ့
ပညာတွေကို ထပ်မံလေ့လာနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
😊Smart work ကသာ ကိုယ့်ကို ကိုယ့်တက်လမ်း
ကို ရှာဖွေပေးနိုင်ပြီး၊ ကိုယ့်ကို ဒီထက် တိုးတက်
မြင့်မားတဲ့တစ်နေရာကို ပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ ။
အမှန်တကယ် ထက်မြက်သော လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အဓိက ယုံကြည်ချက်များ
➡️တကယ်တော်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုတာ သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို
ပိုကောင်းလာအောင် ပြောင်းလဲပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ
သူတို့ကိုယ်သူတို့ တွေ့မြင်သုံးသပ်တာထက်ပိုပြီး ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေက ဝန်ထမ်းတွေကို ပိုမြင်တတ်ကြပါတယ်။
ပြီးတော့ ဒီလိုသုံးသပ်မြင်တတ်လာအောင်လည်း ဝန်ထမ်းတွေကို
ကူညီပေးကြတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ရည်မှန်းချက်ကြီးကြီး
ထားကြပြီးတော့ ဝန်ထမ်းတွေ အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်
တကယ့်ကြီးမားတဲ့ အလုပ်တွေကို ပြသပေးကြတယ်။
➡️ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာက နားလည်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုပါ။ တကယ်လို့ ဝန်ထမ်းတွေသာ တကယ်ထက်မြက်တဲ့
နားလည်မှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေမှာတောင် ခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေ
ရှိနိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကို ထိရောက်မှုရှိစေအောင်
ရှင်းပြရတတ်ပါတယ်။ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ
အင်တိုက်အားတိုက်နဲ့ တက်ကြွမှုရှိပြီးတော့ ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်း
အမျိုးမျိုးကို တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
➡️သေချာတာတစ်ခုကတော့ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်
တွေဟာ သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတိုင်း ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊
သူ့ရဲ့ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက်တွေက တဆင့် ထက်မြက်ထူးချွန်တဲ့
ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ အနှစ်သာရဟာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။
➡️ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အပြောနဲ့မဟုတ်ဘဲ
လုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့် ယုံကြည်မှုနဲ့ လေးစားသဘောကျမှုကို
ဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာဆိုတာ အရေးကြီးကြောင်းကို
ခေါင်းဆောင်များစွာ ပြောကြပါတယ်။ ဒီစကားကို အမှန်တကယ်
ယုံကြည်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ နေ့ရက်တိုင်းမှာ ဂုဏ်သိက္ခာရှိမှုကို
လက်တွေ့ပြသပြီး သူတို့ရဲ့ပြောစကားအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
ကိုယ်တွေ့မြင်ချင် ဖြစ်စေချင်တဲ့ အပြုအမူကို လူတွေကို တစ်နေကုန်
တဖျစ်တောက်တောက်ပြောမနေဘဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အပြုအမူနဲ့ ပြသပြီး အောင်မြင်အောင် လုပ်ဆောင်ကြပါတယ်။
➡️တကယ်တော်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်ဆိုတာ သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို
တကယ်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။ ဒီယုံကြည်မှုဟာ ဝန်ထမ်းတွေကို
ပိုကောင်းမွန်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ တိုက်တွန်းမှုပါပဲ။
ဒါကြောင့် တကယ်ထက်မြက်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ချမှတ်ထားတဲ့
🔷(၁) တိုးတက်ကြီးထွားမှုကို တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်
🔴သာမန်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ အတော်ဆုံး အလုပ်အကြိုးစားဆုံး
ဝန်ထမ်းတွေကို သူတို့ထက်သာလွန်မယ့်သူတွေ အဖြစ် ယုံကြည်ပြီး
ကြောက်ရွံ့တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချက်အလက်တွေ မျှဝေဖို့၊
လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပေးအပ်ဖို့ တွေဝေတွန့်ဆုတ်တတ်ကြပါတယ်။
🔵တစ်ဖက်မှာတော့ ထက်မြက်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ဝန်ထမ်းတွေ
ဒီလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ သူတို့နေရာ အစားထိုးမယ့်သူတွေကို
အမြဲလက်သပ်မွေးထားပြီး ခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်လာစေဖို့အတွက်
ဒီလိုထက်မြက်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့အတော်ဆုံး
ဝန်ထမ်းတွေကို စွမ်းရည်တွေ ပိုမိုမြင့်မားလာစေချင်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့
တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို
🔷(၂) ဝန်ထမ်းဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းပါ။
🔴သာမန် လုပ်ငန်းရှင်တွေ ဆိုတာ လူတွေကို စုပေါင်း၊ စိတ်ဓာတ်
တက်ကြွစေအောင် ကြိုးစားပြီး ဆုချီးမြှင့်ကာ အားလုံးကို အတူတူ
လူတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် တက်ကြွမှုနဲ့ သင်ကြားလေ့လာမှုပုံစံရှိတယ်
ဆိုတဲ့ အချက်ကို လေးစားပြီး တစ်ဦးချင်းစီကို ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။ မတူညီတဲ့ တစ်စုံတစ်ခုဟာ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်စီကို အမှတ်အသား
ဖြစ်စေပြီး အတော်ဆုံးလုပ်ငန်းရှင်က ဒါတွေကို စဉ်းစားနေမှာ
🔷(၃) ဝန်ထမ်းအားလုံး သာတူညီမျှပါပဲ။
🔴သာမန်လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဝန်ထမ်းတွေကို ကလေးတွေလို
ဆက်ဆံကြပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကို အမြဲမပြတ် ကြီးကြပ်စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုတယ်လို့ သူတို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စည်းမျဉ်းတွေ
ချမှတ်ကာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို သူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း
သေချာအောင် ဆောင်ရွက်စေဖို့နဲ့ အမှားတွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့
🔵ထက်မြက်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ ဝန်ထမ်းတွေကို
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ သက်တူရွယ်တူတွေလို့
မြင်ကြပါတယ်။ ထက်မြက်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ မကြာခဏ ဝင်ပါခြင်းမရှိဘဲ သူတို့တန်ဖိုးထားတာတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလုပ်တွေ
ယုံကြည်ချက်တွေကို ရှင်းလင်းသေချာအောင် လုပ်ဆောင်ပြီး
🔷(၄) အလုပ်ဆိုတာ ပျော်စရာကောင်းသင့်ပါတယ်။
🔴သာမန်လုပ်ငန်းရှင်များဟာ လူတွေ လုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ
မလုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ လုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ မြင်တတ်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေ မခိုမကပ်အောင် မပျင်းရိစေအောင် စိစစ်လုပ်ဆောင်ဖို့
“ငါ့ကြောင့်သာ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဒီမှာ ဘာမှပြီးမှာမဟုတ်ဘူး”
🔵ဒါပေမဲ့ ထက်မြက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ သူတို့အလုပ်ကို
ချစ်မြတ်နိုးပြီး တခြားလူတွေအားလုံးလည်း ချစ်မြတ်နိုးနိုင်တယ်လို့
ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေက ဝန်ထမ်းတွေကို သူတို့ရဲ့
စွမ်းရည်၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ပင်ကိုအရည်အချင်းနဲ့ ညီမျှတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေကို ပေးကြပါတယ်။ အောင်မြင်မှုတွေကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုကာ
ဝန်ထမ်းတွေ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ ကောင်းမွန်တဲ့
🔷(၅) စိတ်တူသဘောတူမျိုးမဟုတ်တဲ့ ကွဲပြားခြားနားခြင်းဟာ
🔴သာမန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အကြံဉာဏ်နဲ့
ညီမျှတဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကို လိုချင်ကြပါတယ်။ ဒီအချက်ကြောင့်
ကိုယ်နဲ့ စိတ်တူ သဘောတူတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ခန့်အပ်ဖို့
ကြိုးပမ်းတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ပုံစံတည်းဆင်တူ စဉ်းစားဖို့
ဝန်ထမ်းတွေကို တိုက်တွန်းအားပေးပြီး “တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့
အလုပ်လုပ်” တဲ့သူတွေကို ဆုချီးမြှင့်တတ်ကြပါတယ်။
🔵ထက်မြက်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့
ကွဲပြားခြားနားမှုတွေနဲ့ စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေကို တက်ကြွစွာ
ရှာဖွေတတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ သူတို့ကိုယ်ကို မြင်သာအောင်
ပြတတ်ကြပြီး ကုမ္ပဏီကို တွေးခေါ်မှုအသစ်တွေဆီ
🔷(၆) စိတ်ပါဝင်စားတက်ကြွမှု (Motivation) က
🔴သာမန်လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေနဲ့
ခိုင်းစေခြင်းဟာ ဝန်ထမ်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အလုပ်
ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ ဒေါသပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့
အပြစ်ဒဏ်တွေကို လူတွေ ကြောက်ရွံ့ကြတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
တဆင့် စိတ်ပါဝင်စားတက်ကြွစေပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေဟာ
သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေ၊ အမြင်တွေနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို
တခြားအရာတွေထက်ပိုပြီး တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကို သူတို့ နားလည်
🔷(၇) အပြောင်းအလဲဆိုတာ အခွင့်အလမ်းတစ်ခု၊
🔴“ဒီပုံစံအတိုင်း ငါတို့အမြဲလုပ်လာခဲ့တာပဲ” ဆိုတာဟာ
သာမန်လုပ်ငန်းရှင်တွေ လက်ကိုင်သုံးတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါပဲ။
အပြောင်းအလဲဆိုတာ မလိုအပ်ဘဲ ကောင်းခြင်းထက် ဆိုးကျိုးကိုသာ
သူတို့တွေက နည်းလမ်းတွေကို အမြဲမပြတ်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်
ပြင်ဆင်တတ်ကြပြီး ပြောင်းလဲမှုကို လက်ခံယုံကြည်ကြပါတယ်။
👉တကယ်လို့ မိတ်ဆွေဟာ အခုလက်ရှိမှာ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး
ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ မိတ်ဆွေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကို
ကျွန်တော်တို့ လိုချင်မျှော်မှန်းထားတဲ့ အလုပ်မှာခန့်အပ်ခြင်းခံရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများ
ရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကုမ္ပဏီ အနေနဲ့
သတိထားမိလာအောင် စတင် လုပ်ဆောင်
သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာ ကိုယ်နဲ့
သင့်တော်မယ့် အလုပ် (သို့) ကုမ္ပဏီကို
ရှာမတွေ့သေးဘူး ဆိုရင်တော့ အချိန်ယူပြီး
ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လျှောက်ဖို့
ကုမ္ပဏီ ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကိုယ် မျှော်မှန်းထားတဲ့
လုပ်ငန်းရှင် (သို့) ကုမ္ပဏီဟာ ဘယ်လိုဖြစ်ရမယ်
ဆိုတာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာ၊
ကုမ္ပဏီတွေ အကြောင်း ရှာဖွေလေ့လာပြီး
ကိုယ် မျှော်မှန်းထားတဲ့ လုပ်ငန်းရှင် (သို့) ကုမ္ပဏီ
စာရင်းပြုစုပြီးတာနဲ့ ကိုယ် လိုချင်တဲ့ အလုပ်
ပတ်ဝန်းကျင်၊ လစာ၊ ခံစားခွင့်များနှင့် အခြား
တွေကို စာရင်းရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာထားပြီး ကိုယ့်အရည်
အချင်းတွေကို သူတို့ဘက်မှ သတိထားမိလာ
ဥပမာ- ကုမ္ပဏီ ရဲ့ Facebook page တွေကို
follow လုပ်ထားခြင်းမျိုး ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီရဲ့ဘယ်အချက်တွေက ကိုယ့်ကို ဆွဲဆောင်
နေသလဲ ဆိုတာကိုပါ လေ့လာထားသင့်ပါတယ်။
အဲ့ဒါမှ “သင် ဒီကုမ္ပဏီ အကြောင်းသိပါသလား”
ဒါမှမဟုတ် “ပထမဆုံးရက် ၃၀ အတွင်းမှာ
မေးခံရတဲ့အခါ အချက်အလက်ကျကျ ပြောဆို
နိုင်မှာဖြစ်ပြီး စိတ်ဝင်စားမှု ထက်သန်စွာ
လေ့လာထားတယ် ဆိုတာလည်း ပေါ်လွင်နေ
မှာပါ။ထပ်ပြီးတော့ ကုမ္ပဏီမှာ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့
အခြေအနေတွေ ဥပမာ. ထုတ်ကုန်ပစ္စည်း
ရတာတွေ၊ ကုမ္ပဏီပြဿနာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
ဗဟုသုတတွေနဲ့ အထက်လူကြီးက ကိုယ့်အပေါ်
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပဲ အပြင်လူ
တစ်ယောက်အနေနဲ့တောင်မှ ကုမ္ပဏီ အရေးနဲ့
ပတ်သက်ပြီး တက်ကြွမှုရှိတယ်ဆိုတာကို ပြသနိုင်
ဘယ်လောက် ကြိုးကြိုးစားစား ကောင်းမွန်စွာ
ကုမ္ပဏီရဲ့ Page ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်
နေခြင်းဖြင့် အလုပ်လစ်လပ်မှုတွေရှိလို့ အလုပ်ခေါ်
ကိုယ့်အနေနဲ့ တခြားသူတွေထက် ပိုပြီးစောစီးစွာ
သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ ဟာဘယ်လို
သိနေခြင်းဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေနှင့်
ကုမ္ပဏီ တော်တော်များများဟာ အလုပ်ပြပွဲ
ဝက်ဒ်ဆိုဒ်(Website) ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်
သင့်လျော်တဲ့ဆိုဒ် (Website) တွေမှာ profiles
တွေတည်ဆောက်ပါ။ Professional ကျတဲ့
ကိုယ်ဟာ သူတို့အလုပ်တွေ အတွက်
Profile တွေတည်ဆောက်ပြီးပြီ ဆိုရင်တော့
ဘယ်သူဟာ ကိုယ်အလုပ်ရရှိဖို့ ကူညီနိုင်မလဲ
ဆိုတာ ကြိုတင်မသိနိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ
ဟောင်းတွေထဲမှာ အဆက်အသွယ် ရှာဖွေ
သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ဟာ Professional
အဆက်အသွယ်တွေ ရှာဖို့အတွက် ကောင်းတဲ့
အချိန်ယူပြီး ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ကောင်းစွာ
တော့ဘဲ ဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ
အကြောင်းကြိုတင် လေ့လာပါ။ သင့်တင့်စွာ
ဝတ်စားဆင်ယင်ပါ။ အမေးအဖြေတွေ ကြို
ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေကို
အသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းရှင် မှ ကိုယ့်အပေါ်အလုပ်
တာဝန် ခန့်အပ်စေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
မေးမြန်းလိုတဲ့အခါမှာ ကုမ္ပဏီ ကိုဆက်သွယ်
မေးမြန်းဖို့ မကြောက်ပါနဲ့။ ယဉ်ကျေးပြီး
Professional ကျကျရေးသားထားတဲ့ Email
ထက်သန်မှုကို ဖော်ပြရာ ရောက်သလို ကုမ္ပဏီရဲ့
အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို
အလုပ်တွေကို ရရှိပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်။
ထိရောက်သော စီမံအုပ်ချုပ်ရေး နည်းလမ်းများ
အကယ်၍ ကိုယ့်ရဲ့ ရာထူးမှာ မန်နေဂျာဆိုတဲ့
ဝမ်းကြောင်းမှုမှာ အနည်းနဲ့ အများတော့ စီမံခန့်ခွဲမှု
တွေ ပြုလုပ်ရမှာပါ။ ပြီးတော့ စွန့်ဦးတီထွင်သူ
တစ်ယောက်ရယ်လို့ ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင် ဆောင်ရွက်
ရတဲ့ အရာတွေထဲမှာ စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေ
လည်း ပါနေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကိုယ်ဟာ အလိုလို
မန်နေဂျာတစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သဘောအရ ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့
ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို
လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ပေးနေသူတွေ
ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အကောင်အထည်ဖော်တဲ့
နေရာမှာ အချိန်တိုတိုနဲ့ ခရီးရောက်အောင်
ပြုလုပ်ပေးဖို့က ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တော်တဲ့ မန်နေဂျာ တစ်ဦးဆိုတာ မိမိရဲ့
အလုပ်များများ လုပ်ခိုင်းတာဟာ သူတို့ကို
စိတ်မကျေနပ်မှုတွေ ပေးနိုင်ပြီး ကိုယ့်အပေါ်မှာ
ငြိုငြင်လာတဲ့အထိပါ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်
ညှာတာပြီး ခိုင်းပြန်ရင်လည်း ဝန်ထမ်းတွေကို
ပျင်းရိစေပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းနဲ့ ကုမ္ပဏီ
တစ်ခုချင်းစီမှာ ခံယူချက် အသီးသီးရှိကြတဲ့အတွက်
အမှန်ဆုံး အုပ်ချုပ်မှုပုံစံရယ်လို့ မရှိပါဘူး။
ဒါပေမယ့် လုံးဝမှားယွင်းတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်း
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ထိရောက်တဲ့
မှားယွင်းတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံစံတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာပဲ
၁။ 🔸အမြဲ တသမတ်တည်းရှိပါစေ။
ဒါဟာ နေရာတော်တော်များများမှာ အသုံးပြုတဲ့
ပထမဆုံး နည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့
စီမံခန့်ခွဲမှုဟာ ထိရောက်မှုရှိမရှိ မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ
ပထမဆုံး အနေနဲ့ တစ်သမတ်တည်းရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ကိုယ် အားပေးချီးမြှောက်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့
အပြုအမူမျိုးပေါ်လာချိန်တိုင်းမှာ အမြဲ အားပေး
ချီးမြှောက်ပြီး ကိုယ် သဘောမကျတဲ့ အပြုအမူမျိုး
ပေါ်လာချိန်တိုင်းမှာလည်း အမြဲ တားမြစ်ရပါမယ်။
အဲ့ဒါတွေအပြင် ကိုယ့်ရဲ့ အဖွဲ့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေ
အားလုံးကို မျှမျှတတ ဆက်ဆံရပါမယ်။
၂။🔸 ပြောဆိုဆက်ဆံရာမှာ ရှင်းလင်းမှု၊ တိကျမှုနဲ့
စေ့စပ်သေချာမှုတို့ကို အဓိက ထားပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ အဖွဲ့သားတွေကို ဘယ်လိုမျိုး ပြောဆို
ဆက်ဆံသလဲဆိုတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို
အကြောင်းကို ပြန်ပြောတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ်
အဖွဲ့အစည်းထဲက အကြောင်းအရာ အသစ်တွေကို
ဝေငှပေးတဲ့အခါတွေမှာ ရှင်းလင်းမှု၊ တိကျမှုနဲ့
စေ့စပ်သေချာမှုတွေကို အဓိက ထားသင့်ပါတယ်။
လူကိုယ်တိုင် ဖြစ်စေ၊ email ၊ တယ်လီဖုန်း ဘယ်လို
အဲ့ဒီအချက်တွေဟာ အသုံးဝင်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လွဲမှားတာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့နဲ့ ကိုယ်ဆိုလိုတဲ့
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ တိတိကျကျ စေ့စပ်သေချာစွာ
ပြောဆိုတတ်တာဟာ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း
၃။ 🔸အဖွဲ့အစည်းအတွက် ပန်းတိုင်တစ်ခုကို သတ်မှတ်ပါ။
ကိုယ့်ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေကို အတူတကွ
အလုပ်လုပ်စေချင်ရင် သူတို့အတူ လုပ်ဆောင်ရမယ့်
အလုပ်မျိုးကို ထားရှိပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဌာနတစ်ခု
ပန်းတိုင်တွေ သတ်မှတ်ပေးတာဟာ စိတ်သဘော
ထား မတူညီတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး အဖွဲ့ဝင်တွေကို
သီးခြားစီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအစား အားလုံးကို
၄။ 🔸အလုပ်ကြိုးစားမှုကို လူအများရှေ့မှာ
ကိုယ့်ရဲ့ အဖွဲ့သား တစ်ယောက်ယောက်ဟာ
သူ့ကို ဆုငွေ ပေးအပ်တာ၊ ဆုတံဆိပ် တစ်ခုခု
ချီးမြှင့်တာ ဒါမှမဟုတ် စကားနဲ့ ချီးမွမ်းတာလောက်ပဲ
ဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ပြုလုပ်တဲ့
အခါ အဖွဲ့ရဲ့ရှေ့မှာ ပြုလုပ်တာဟာ ချီးမြှင့်ခံရတဲ့
သူကို စိတ်ကျေနပ်မှုရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြောင်းကို တခြားသူူတွေကိုလည်း အသိပေးရာ
ရောက်ပါတယ်။ အရေးကြီးတာ တစ်ခုကတော့
နည်းလမ်း ၁ ကို မမေ့ဖို့ပါ။ ဘက်လိုက်တယ်လို့
မန်နေဂျာ တစ်ယောက် ၊ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်
အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အပြုအမူတွေဟာ စံနမူနာ ဖြစ်နေ
သင့်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အလုပ်နောက်ကျ
ရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာလည်း အချိန်ကို
လေးစားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ဟာ အလွယ်တကူ
သူတို့ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစား
တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရှေ့မှာ
စံပြဝန်ထမ်း တစ်ယောက် ဖြစ်အောင် ကြိုးစားသင့်
၆။ 🔸လူတိုင်းအတွက် နည်းလမ်းတစ်မျိုးတည်းကို
ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာ ထူးခြားကွဲပြားတဲ့
အရည်အချင်းတွေ ၊ အားသာချက် ၊ အားနည်းချက်
တွေ ၊ အတွေးအမြင်တွေနဲ့ တည်ရှိနေကြတာပါ။
အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့ကို စိတ်ဓာတ်တက်ကြွအောင်
လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ နေရာမှာ အားလုံးအတွက်
တစ်ဦးချင်းစီကို အလေးထားပြီး တစ်ဦးချင်းစီနဲ့
အဆင်ပြေမယ့် ပုံစံမျိုးကို ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်
၇။ 🔸အတတ်နိုင်ဆုံး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါစေ။
တစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဖော်ပြပေးတဲ့အပြင်
ကိုယ့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကို ရစေပါတယ်။
ကိုယ်ဟာ တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လိမ်ခဲ့တာ၊
ချန်လှပ်ထားတာမျိုး လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဝန်ထမ်းတွေနဲ့
ဆက်ဆံရေးကို ထိခိုက်စေပြီး ခေါင်းဆောင်
တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရှိသင့်တဲ့ လေးစားခံရမှုကို
လည်း ထိခိုက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈။ 🔸စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ အတွေးအမြင် အားလုံးကို
ဆွေးနွေးမှုတွေမှာ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ပြောဆိုတတ်သူ
တွေ ၊ အဖွဲ့အစည်းကို တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်
လိုစိတ်ရှိသူတွေ များများရှိလေ ကောင်းလေပါပဲ။
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ အတွေးအမြင်တစ်ခုကို
ထုတ်ဖော်ပြောလာခဲ့ရင် အဲ့ဒီအမြင်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့
အမြင်နဲ့ လွဲနေမယ်၊ စိတ်ကူးကောင်း မဟုတ်ဘူး
ဆိုရင်တောင် အပြစ်တင်တာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်ပါ
ဘူး။ ထင်မြင်ချက်တစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ပြောဆို
တဲ့အတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အပြစ်တင်
ခဲ့မယ်ဆိုရင် အပြစ်တင်ခံရသူမှာ စိတ်မကျေနပ်
မှုတွေ ဖြစ်စေပြီး အခြားသူတွေကိုလည်း သူတို့ရဲ့
အမြင်တွေ မပြောရဲအောင် တားဆီးလိုက်သလို
၉။ 🔸ဝန်ထမ်းတွေကို အလုပ်မှာ ပျော်အောင်ထားပါ။
ဘိလိယက်ခုံတွေ ထားပေးတာမျိုး၊ အဝတ်အစား
(Uniform) နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စည်းကမ်းတွေကို
ဖျက်သိမ်းပေးစရာ မလိုပါဘူး။ ဥပမာ – မစီစဉ်ထား
ဘဲ နေ့လည်စာ အတူတူ ထွက်စားတာမျိုး၊ နားနေခန်း
စကားစမြည်ပြောတာမျိုးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ
ကို ပျော်စေပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေကိုသာ စိတ်ပျော်ရွှင်
အောင် ထားနိုင်ရင် သူတို့ဟာလည်း ကိုယ့်အတွက်
အကောင်းဆုံး ဆိုတာတွေကို လုပ်ဆောင်ပေး
၁၀။ 🔸နားထောင်ပြီး မေးခွန်းတွေ မေးပါ။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အုပ်ချုပ်မှု
ပုံစံကို သဘောမကျတာ ဒါမှမဟုတ် ကုမ္ပဏီရဲ့
ဦးတည်ချက်ကို သဘောမကျတာမျိုး ကြုံလာခဲ့ရရင်
သူ့ကို နှုတ်မပိတ်ပစ်ပါနဲ့။ ပြောတာကို နားထောင်
ပေးပါ။ အဲ့ဒီကိစ္စအပေါ် ဘယ်လိုအတွေးမျိုး အမြင်မျိုး
ရှိလဲဆိုတာ တခြားသူတွေကိုလည်း မေးပါ။ အဲ့ဒီလို
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာများကို
ဖော်ထုတ် ဖြေရှင်းစေနိုင်ခြင်းဟာ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လုံး
အတွက် အကျိုးရှိစေပါတယ်။ အဲ့ဒီလို လုပ်ဆောင်ခြင်း
ဟာ ဝန်ထမ်းတွေကို ပိုပြီး ကျေနပ်စေကာ ပိုမို သိတတ်
👉အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းလမ်းတွေဟာ
ကိုယ့်ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ(Personal) ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့
အဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေဟာ အောင်မြင်မှုကို ရရှိစေမယ့်
ညွှန်ကြားချက်တွေ အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ အခြေခံကျတဲ့
အမှန်တရား၊ အသုံးဝင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် နည်းလမ်းတွေအပြင် အဲ့ဒီနည်းလမ်း
တွေကိုပါ လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်မယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့
ဝန်ထမ်းတွေဟာ ညီညွတ်ပြီး တန်ဖိုးရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း
တစ်ခု ဖြစ်လာမှာ အသေအချာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ခွင်မှာ အလုပ်ပြီးမြောက်စေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းများ
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ တစ်နေ့တာမှာ အလုပ်ချိန်အများကြီး
ရှိကြတာမဟုတ်လို့ ရတဲ့အချိန်ကို အကျိုးရှိရှိအသုံးချတတ်ဖို့
အရေးကြီးပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အလုပ် ပို ပြီးမြောက်
ဖို့အတွက် အလုပ်ချိန်ကိုတိုးလုပ်တာရယ် ဒါမှမဟုတ်
အလုပ်ကို ပါးနပ်စွာလုပ်တာရယ်ဆိုပြီး နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါ
တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အလုပ်ကို ပါးနပ်မှုရှိရှိလုပ်ရတာ
ကို ပိုပြီး သဘောကျပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အလုပ်ပိုတွင်ဖို့ဆိုတာ ကျားကုတ်ကျားခဲ
လုပ်ယူရတဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပေမယ့်လို့ ကိုယ့်အချိန်ကို ကောင်း
ကောင်းစီမံတတ်ဖို့လိုတာ အမှန်ပါ။ ဒီပို့စ်မှာတော့ အဲဒီလို
၁. 🔹အလုပ်တွေကို အချိန်ဘယ်လောက်ယူပြီးလုပ်နေ
ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အလုပ်တွေကို အချိန်ဘယ်လောက်
ယူပြီး လုပ်နေသလဲဆိုတဲ့နေရာမှာ အတွက်အချက်ကောင်း
လှပြီလို့ ထင်နေပါသလား? ဥပမာ – နေ့စဉ်အလုပ်တာဝန်
တွေအပြင် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ အီးမေးလ်တွေ အတွက် အသုံးပြု
တဲ့အချိန်တွေ အပါအဝင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ၁၇ ရာခိုင်နှုန်း
သောလူတွေသာ ကိုယ်အသုံးပြုတဲ့အချိန်ကို အတိအကျ
အလုပ်မှာ နားချိန်ကို သူ့အချိန်နဲ့သူထားတာဟာအလုပ်မှာ
အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်း ပိုတိုးစေပါတယ်။ အချိန်ယူပြီးလုပ်ရတဲ့
အလုပ်တွေမှာ ခဏတဖြုတ် နားနားပေးရင် ကိုယ့်ရဲ့လုပ်
ဆောင်ရည်ကို ကျမသွားစေအောင် ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုကို နားချိန်လုံးဝမယူဘဲ ဆက်တိုက်လုပ်တဲ့အခါ
၃. 🔹ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်တဲ့ deadline တွေထားရှိပါ။🔹
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ထားရှိတဲ့ သင့်တင့်မျှတတဲ့ stress က
အချိန်စိတ်ကြိုက်ယူလို့ရတဲ့အလုပ် ဒါမှမဟုတ် ပရောဂျက်
တွေမှာ deadline ကို ကိုယ့်ဘာသာသတ်မှတ်ပြီး လုပ်ကြည့်
လိုက်ပါ။ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန် အမီပြီးအောင်လုပ်
နေရတဲ့အတွက် အာရုံဘယ်လောက်ပိုစိုက်နိုင်ပြီး အလုပ်
၄. 🔹“၂ မိနစ်စည်းမျဉ်း”ကို ကျင့်ကြံပါ။🔹
၂ မိနစ် (သို့) ၂ မိနစ်အောက်နဲ့ ပြီးနိုင်တဲ့အလုပ်ဆိုရင်
ချက်ချင်းလုပ်လိုက်ပါ။ အဲ့ဒီအလုပ်ကို ချက်ချင်းလုပ်
လိုက်တာက နောက်မှလုပ်တာလောက် အချိန်မယူရပါဘူး
လို့ နာမည်ကျော်အောင်မြင်ရေးစာရေးဆရာ တစ်ယောက်
က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီစည်းမျဉ်းကို အကြံပြု
အသုံးချတဲ့ သုတေသီတစ်ဦးဆိုရင် အွန်လိုင်းမှာ လွှမ်းမိုးမှု
အရှိဆုံး Content ဗျူဟာရှင်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်နေ
၅. 🔹အစည်းအဝေးတွေကို ငြင်းသာငြင်းပါ။🔹
တစ်ခုပါ။ပျမ်းမျှရုံးဝန်ထမ်းတွေဟာ အကျိုးမထူးတဲ့ အစည်း
အဝေးတွေမှာ နာရီတော်တော်များများကို သုံးနေရပါတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ နောက်ထပ် အစည်းအဝေးတစ်ခု
မလုပ်ခင်မှာ အစည်းအဝေး အတွက် ရည်ရွယ်တဲ့ အလုပ်
တွေကို အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ဖုန်းနဲ့တင် လုပ်လို့ဖြစ်မလား
ဒါကတော့ ကိုယ့်အတွက် အချိန်ဘောနပ်စ်ရထားသလိုပါပဲ။
Facebook သုံးတာတို့လုပ်မယ့်အစား အလုပ်အီးမေးလ်
ပို့တာတို့၊ တစ်နေ့တာလုပ်စရာကို စာရင်းလုပ်တာတို့
ဒါမှမဟုတ် အိုင်ဒီယာသစ်တွေစဉ်းစားတာတို့ ပြုလုပ်နိုင်
၇. 🔹အလုပ်သုံးလေးမျိုးကို တစ်ပြိုင်တည်းမလုပ်ပါနဲ့။🔹
အရေးကြီးတဲ့စွမ်းရည်တစ်ခုလို့ ယူဆတတ်ကြပေမယ့် အဲ့ဒီ
စွမ်းရည်က ထင်သလိုအလုပ်မပြီးမြောက်စေပါဘူး။ လုပ်ငန်း
အချိန်ကုန်စေသလို အလုပ်လည်းမတွင်လှပါဘူး။ အလုပ်
တစ်ခုကို အရင်ပြီးမြောက်အောင်လုပ်ပြီးမှ နောက်အလုပ်ကို
၈. 🔹ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဖို့ နားချိန်ယူပါ။🔹
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားဖို့ အချိန်ပေးတာဟာ အလုပ်တွင်စေဖို့
အမှန်တကယ် အကူအညီဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို
ရင် ရုံးတက်ရတဲ့နေ့တွေထဲမှာ လမ်းလျှောက်ဖို့ သို့မဟုတ်
Gym ကိုသွားဖို့အတွက် အချိန်ထည့်သွင်းသတ်မှတ်ထားပါ။
တာဟာ ခေါင်းကြည်စေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှုပြန်ရဖို့ လိုအပ်နေ
▪️အထက်ပါ အချက်လက်တွေကတော့ အလုပ်ခွင်မှာ
အလုပ်တွင်စေဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ရေးသားထား
တာပါ။ ဆက်လက်ပြီးတော့ ကျန်ရှိနေတဲ့ အချက်အလက်
ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်မှာ ရှိနေသင့်တဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အရည်အချင်း (၇) ခု
✒️ တကယ်ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဆိုတာ သူတို့ရဲ့ လက်အောက်ငယ်သားတွေကို ပိုတော်လာအောင် ပြောင်းလဲပေးတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကျွန်တော်တို့ တွေ့မြင်ရတာထက်ပိုပြီး သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို ပိုမြင်တတ်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီလိုမြင်တတ်လာအောင်လည်း ကျွန်တော်တို့ကို ကူညီပေးကြတယ်။
✒️ သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကို ထိရောက်မှုရှိစေအောင် လုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို ရှင်းပြရတတ်ပါတယ်။
✒️ ထူးချွန်ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာ အင်တိုက်အားတိုက်နဲ့ တက်ကြွမှုရှိပြီးတော့ ထူးခြားတဲ့ အရည်အချင်းအမျိုးမျိုးကို တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစပ်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
✒️ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ သူ့ရဲ့ခံယူချက်၊ ယုံကြည်ချက်တွေကတဆင့် ထက်မြက်ထူးချွန်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ အနှစ်သာရဟာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်။
✒️ တကယ်တော်တဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆိုတာ သူ့လူတွေကို တကယ်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်။
✒️ ဒီယုံကြည်မှုဟာ သူတို့ကို လူတွေရှင်သန်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးဖို့ တိုက်တွန်းမှုပါပဲ။တကယ်လို့ ကိုယ့်မှာ တစ်နေ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ရှိတယ်ဆိုရင် ဒီအချက်တွေနဲ့ ပြည်စုံနေမှ ရရမှာပါ . . .
✒️ ဒါကြောင့် တကယ်ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့ အရည်အချင်းအချို့ကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့
⏺ (၁) လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ တိုးတက်ကြီးထွားမှုကို တိုက်တွန်းအားပေးပါ
သမရိုးကျ ခေါင်းဆောင်တွေက အတော်ဆုံး အလုပ်အကြိုးစားဆုံး ဝန်ထမ်းတွေကို သူတို့ထက်သာလွန်မယ့် သူတွေအဖြစ် ယုံကြည်ပြီး ကြောက်ရွံ့တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချက်အလက်တွေ မျှဝေဖို့၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပေးအပ်ဖို့ တွေဝေတွန့်ဆုတ်တတ်ကြပါတယ်။
တခြားတစ်ဖက်မှာလည်း ထူးချွန်တဲ့ ခေါင်းဆောင်များက ဝန်ထမ်းတွေ တိုးတက်မှုရှိလာတာကို မြင်ရတာနှစ်သက်တတ်ကြပါတယ်။
ဒီလိုထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်များဟာ သူတို့ရဲ့အတော်ဆုံး ဝန်ထမ်းတွေကို စွမ်းရည်တွေ ပိုမိုမြင့်မားလာစေချင်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို နားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။
ထူးချွန်တဲ့ လူကို နေရာပေးတယ်ဆိုတာလဲ သင့်တော်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
⏺ (၂) ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်စီတိုင်းရဲ့ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို သိရှိနေပါစေ
သာမန်ခေါင်းဆောင် တွေဆိုတာ လူတွေကို စုပေါင်း၊ စိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေအာင် ကြိုးစားပြီး ဆုချီးမြှင့်ကာ အားလုံးကို အတူတူ သင်ကြားပေးတတ်ကြပါတယ်။
ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကတော့ လူတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် တက်ကြွမှုနဲ့ သင်ကြားလေ့လာမှုပုံစံရှိတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို လေးစားပြီး တစ်ချင်းစီကို ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။
⏺ (၃) ဝန်ထမ်းတွေကို လက်အောက်ငယ်သားတွေလို မဆက်ဆံသင့်ပါ
သာမန်ခေါင်းဆောင်တွေက ဝန်ထမ်းတွေကို အမြဲမပြတ် ကြီးကြပ်စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုတယ်လို့ သူတို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စည်းမျဉ်းတွေ ချမှတ်ကာ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို သူ့လမ်းကြောင်းအတိုင်း သေချာအောင်ဆောင်ရွက်စေဖို့နဲ့ အမှားတွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ သူတို့ရဲ့အလုပ်လို့ ထင်မြင်ကြပါတယ်။
ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်များကတော့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် မကြာခဏ ဝင်ပါခြင်းမရှိဘဲ သူတို့တန်ဖိုးထားတာတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အလုပ်ကို ယုံကြည်ချက်တွေကို ရှင်းလင်းသေချာအောင် လုပ်ဆောင်ပြီး လိုအပ်မှသာ ကြားဝင်တတ်ကြပါတယ်။
⏺ (၄) အလုပ်ခွင်ဟာ ပျော်စရာကောင်းသင့်ပါတယ်။
သာမန်ခေါင်းဆောင်တွေက ဝန်ထမ်းတွေ လုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ မလုပ်ချင်သည်ဖြစ်စေ မခိုမကပ်အောင် မပျင်းရိစေအောင် စိစစ်လုပ်ဆောင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ထင်မြင်တတ်ကြပါတယ်။
ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကတော့ သူတို့အလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး တခြားလူတွေအားလုံးလည်း ချစ်မြတ်နိုးနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။
ဝန်ထမ်းတွေကို သူတို့ရဲ့ စွမ်းရည်၊ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ပင်ကိုအရည်အချင်းနဲ့ ညီမျှတဲ့ အလုပ်တာဝန်တွေကို ပေးကြပါတယ်။
အောင်မြင်မှုတွေကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုကာ ဝန်ထမ်းတွေ ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ feedback တွေပေးတတ်ကြပါတယ်။
⏺ (၅) စိတ်တူသဘောတူမျိုးမဟုတ်တဲ့ ကွဲပြားခြားနားခြင်းဟာ အသီးအပွင့်အကျိုးကျေးဇူးတွေ ဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်
သာမန်ခေါင်းဆောင် တွေဟာ ကိုယ်နဲ့ စိတ်တူသဘောတူတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ခန့်အပ်ဖို့ ကြိုးပမ်းတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ပုံစံတည်းဆင်တူ စဉ်းစားဖို့ ဝန်ထမ်းတွေကို တိုက်တွန်းအားပေးပြီး “တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်” တဲ့သူတွေကို ဆုချီးမြှင့်တတ်ကြပါတယ်။
ထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင် တွေကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေနဲ့ စိတ်ကူးအကြံဉာဏ်တွေကို တက်ကြွစွာ ရှာဖွေတတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ သူတို့ကိုယ်ကိုယ် မြင်သာအောင်ပြတတ်ကြပြီး ကုမ္ပဏီကို တွေးခေါ်မှုအသစ်တွေဆီ ပြသပေးတတ်ကြပါတယ်။
⏺ (၆) စိတ်ပါဝင်စားတက်ကြွမှု (Motivation) က လှုံ့ဆော်အားပေးခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်၊ ပူပန်သောကများမှ မဟုတ်ပါ။
သာမန်ခေါင်းဆောင်တွေဟာ တင်းကျပ်တဲ့ စည်းကမ်းတွေနဲ့ စည်းကမ်းတွေနဲ့ ခိုင်းစေခြင်းဟာ ဝန်ထမ်းတွေကို ထိထိရောက်ရောက် အလုပ်လုပ်စေတယ်လို့ ထင်မြင်ကြပါတယ်။
ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အဝ လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့ ဒေါသပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ အပြစ်ဒဏ်တွေကို လူတွေ ကြောက်ရွံ့ကြတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဝန်ထမ်းတွေဟာ အလုပ်ကို ဂရုမစိုက်ကြတော့ဘဲ သူတို့ရဲ့အလုပ် ဆက်လက်တည်မြဲနေစေဖို့နဲ့ သူဌေးကို ချွေးသိပ်ဖြေဖျောက်ပေးဖို့ကိုသာ လူတွေ ဂရုစိုက်လာကြပါတယ်။
ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင် တွေ ကတော့ လှုံ့ဆော်အားပေးခြင်းကနေတဆင့် စိတ်ပါဝင်စားတက်ကြွစေပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေ၊ အမြင်တွေနဲ့ စိတ်အားထက်သန်မှုကို တခြားအရာတွေထက်ပိုပြီး တုံ့ပြန်မယ်ဆိုတာကို သူတို့ နားလည်သဘောပေါက်ကြပါတယ်။
⏺ (၇) အပြောင်းအလဲဆိုတာ အခွင့်အလမ်းတစ်ခု၊ ကျိန်စာမဟုတ်ပါ။
“ဒီပုံစံအတိုင်း ငါတို့အမြဲလုပ်လာခဲ့တာပဲ” ဆိုတာဟာ သာမန်ခေါင်းဆောင် တွေ လက်ကိုင်သုံးတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ပါပဲ။ အပြောင်းအလဲဆိုတာ မလိုအပ်ဘဲ ကောင်းခြင်းထက် ဆိုးကျိုးကိုသာ ပိုဖြစ်စေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြသူတွေပါ။ အချို့သော ထက်မြက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်များကတော့ အပြောင်းအလဲဆိုတာ တိုးတက်မှုအတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဆိုတာကို သိမြင်ကြပါတယ်။ သူတို့တွေက နည်းလမ်းတွေကို အမြဲမပြတ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်တတ်ကြပြီး ပြောင်းလဲမှုကို လက်ခံယုံကြည်ကြပါတယ်။
Richard Branson သို့မဟုတ် လူထူးလူဆန်း Billionaire ကြီးတစ်ယောက်
Richard Branson ဆိုတဲ့ လူထူးဆန်းကြီးကိုတော့ စာဖတ်သူတို့ အနည်းငယ် စိမ်းနေကြပါမှာ . . .
Virgin Airline, Virgin Media, Virgin Empire & Virgin Atlantic အစရှိတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတွေနဲ့တော့ ရုပ်ရှင်တွေထဲ၊ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ မြင်လေ့ရှိကြမှာပါ . . .
ဒီလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီး ကို Richard Banson ဆိုတဲ့ လူထူးဆန်းကြီးတစ်ယောက် ဘယ်လို စွန့်ဦးတီထွင်ပြီး ထူထောင်ခဲ့သလဲ . . .
သူဘယ်လိုကြိုးစားခဲ့လို ယနေ့အခါနာမည်ကျော်ကြားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ ထူထောင်သူအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့သလဲ စသဖြင့် အတုယူနိုင်အောင် Aung Myin ကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Richard ရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အသေးစားလေးတစ်ဖြစ်လဲ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝ
ငယ်စဉ်ကတည်းက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်ဖို့ ဝါသနာပါလာတယ်လို့ ဆိုရမယ် . . .
Richard ဟာ အသက် ၁၁ နှစ်အရွယ်မှာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခု စတင်လုပ်ကိုင်ဖို့ အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါတယ်။
ငယ်သူငယ်ချင်း Nik Powell နဲ့ အတူ ဘက်ဂျရီဂါ ငှက်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို စတင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ငှက်ကလေးတွေ အတွက် လှောင်ချိုင့်လေးတွေကိုတော့ Richard ရဲ့ အဖေက ပြုလုပ် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဘက်ဂျရီဂါ ငှက်ကလေးတွေဟာ ထင်ထားတာထက် မျိုးပွားနှုန်း ပိုမို များပြား မြန်ဆန်တာ ကြောင့် အချိန်ခဏလေး အတွင်းမှာပဲ လူငယ် စွန့်ဦးတီထွင်လေး နှစ်ယောက်ဟာ ငှက်ကလေးတွေကို ပြန်လည် ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ ပြီးဆုံးသွားချိန်မှာတော့ Richard နဲ့ Nik အနေနဲ့ မြို့ခံကလေးတွေ ကို ငှက်လေးတွေ အများကြီး ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Virgin စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစု မွေးဖွားခြင်းရဲ့ အစ
Richard ဟာ အထက်တန်းကျောင်းရောက်တော့ သူငယ်ချင်း Jonathan နဲ့အတူ Stowe School မှာပြထမ်းထားတဲ့ အရေးမပါတဲ့ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေကို လိုက်နာနိုင်ခြင်း မရှိတာကြောင့် ကျောင်းကနေ ထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
Richard နဲ့ Johnny တို့ နှစ်ယောက် အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေဟာ အလုံးစုံသော အပြောင်းအလဲတွေကို ဖော်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ ခံယူထားကြပြီး စီနီယာ ဂျူနီယာ နှိမ့်ချဆက်ဆံမှုတွေ၊ အတင်းအကျပ် ဘုရား ဝတ်ပြုခိုင်းခြင်းတွေ၊ အားကစားပွဲတွေမှာ ပါဝင်ခိုင်းခြင်းတွေ၊ ရိုက်နှက်ဆုံးမမှုတွေ၊ လက်တင်ဘာသာစကားကို လေ့လာခိုင်းတာတွေကို ဆန့်ကျင်မယ်ဆိုရင် မဂ္ဂဇင်း ထုတ်ဝေပြီး ဆန့်ကျင်ခြင်းက အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ဖြစ်မယ်လို့ တွေးမိခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် “Student” လို့ အမည်ရတဲ့ မဂ္ဂဇင်းကို စတင် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး မဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးသားဖို့ အတွက် စာရေးဆရာတွေ၊ ကြော်ငြာ ထည့်သွင်းဖို့ အတွက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေကို အလျင်အမြန် ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။
“Student” မဂ္ဂဇင်းဟာ လူအများ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံလာရပေမယ့် အနေနဲ့ အရှုံးပေါ်မှုတွေ နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် Richard ဟာ တစ်မျိုးကြံရပါတော့တယ်။
Richard အနေနဲ့ တေးဂီတဟာ ကျောင်းသားဘဝရဲ့ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခု အဖြစ် ပါဝင် ပတ်သတ်နေတယ် ဆိုတာကို သိရှိလာခဲ့ပြီး နာမည်ကြီး သီချင်း အယ်လ်ဘမ်တွေကို ချိုသာတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ ရောင်းချ ပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို တွေးတောမိခဲ့ပါတယ်။
သီချင်းခွေ အရောင်းဆိုင်ကို အစမှာတော့ “Slipped Disc” လို့ အမည်ပေးဖို့ အတွက် စဉ်းစားခဲ့ ကြပေမယ့် မိန်းကလေး သူငယ်ချင်း တစ်ဦးက “Virgin” လို့ အမည်ပေးဖို့ အတွက် အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
ယခုမှ ပထမဆုံး အကြိမ် စတင် လုပ်ကိုင်ကြမှာ ဖြစ်တာကြောင့် Virgin ဆိုတဲ့ အမည်က အတွေ့အကြုံ မရှိသေးတဲ့ သူတို့နဲ့ ပိုမို လိုက်ဖက်တယ်လို့ ခံယူခဲ့ကြပြီး အဲဒီနာမည် ကို အသုံးပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
Student မဂ္ဂဇင်းကတော့ ၁၉၇၀ ခုနှစ်မှာ ရပ်တန့်လို့ သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Virgin Mail Order က Student မဂ္ဂဇင်း နေရာမှာ ဝင်ရောက် နေရာယူခဲ့ပြီး ဖောက်သည်သစ် များစွာကို ဖိတ်ခေါ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Virgin သီချင်းခွေ အရောင်းဆိုင် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း
၁၉၇၁ ဇန်နဝါရီလမှာ စာတိုက်ကြီး လုပ်သားတွေ ဆန္ဒပြမှု ပေါ်ပေါက် လာခဲ့တာကြောင့် Virgin Mail-Order လုပ်ငန်း ပြိုလဲသွားနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခြေတကျ ဆိုင်ခန်းနဲ့ ဖွင့်လှစ် ရောင်းချဖို့ အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ ဖွင့်လှစ်မယ့် Virgin သီချင်းခွေ အရောင်းဆိုင်လေးဟာ လူအများစု အတွက် မိတ်ဆွေသစ်တွေ ရှာဖွေနိုင်မယ့် နေရာ၊ သီချင်းခွေလေးတွေ အတူတကွ နားထောင်နိုင်မယ့် နေရာ၊ သူတို့ ဝယ်ယူမယ့် တေးဂီတထဲမှာ စီးမျောနိုင်မယ့် နေရာလေး တစ်ခု အဖြစ် ဖန်တီးဖို့ အတွက် ကြံစည်ခဲ့ကြပါတယ်။
Virgin သီချင်းခွေ အရောင်းဆိုင်လေးကို Oxford လမ်းမထက်က ဖိနပ်ဆိုင်ရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
Richard နဲ့ Nick နှစ်ဦးလုံးဟာ ဆိုင်မှာ လာရောက် ဝယ်ယူအားပေးတဲ့ ဖောက်သည်တွေကို နွေးထွေး ပျူငှာစွာ ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီး ဖောက်သည်တွေ ကို သီချင်း နားထောင်ဖို့ အတွက် နားကြပ်တွေ၊ ဂီတ ဂျာနယ်တွေ မေတ္တာလက်ဆောင် အနေနဲ့ ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ အပြင် ကော်ဖီ အလကား တိုက်ကျွေးခဲ့ပါတယ်။
ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်တာကြောင့် လူအများအကြားမှာ Virgin Store ဟာ နာမည်ကောင်းနဲ့ ကျော်ကြား လာခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကြီး သီချင်းခွေ အရောင်းဆိုင်တွေမှာ ဝယ်ယူရတာထက် Virgin Store မှာ ဝယ်ယူရတာ ပိုမို စစ်မှန်တယ်လို့ လူအများ အနေနဲ့ လက်ခံ ယုံကြည်လို့ လာကြပါတယ်။
Manor စတူဒီယို တည်ထောင်ခြင်း
Richard အနေနဲ့ သီချင်းခွေဆိုင်ဖွင့်ရင်း လေ့လာမိတာက သီချင်းခွေတွေကို မြို့တွင်းမှာ ရှိတဲ့ စတူဒီယိုတွေမှာ အသံသွင်းရတာ အရမ်းကြီး ရှေးရိုးဆန်တယ် ဆိုတာကို သိလာခဲ့ပါတယ်။ သီချင်းခွေတွေကို ကျေးလက်ဒေသတွေမှာ အသံသွင်းရတာ အနုပညာရှင်တွေ အတွက်လည်း ပိုပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိမှာ ဖြစ်သလို စိတ်ဖိစီးမှု ပိုမိုလျော့နည်းစေမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သိရှိလို့ လာခဲ့ပါတယ်။
ဘဏ်ကနေ ရရှိလာတဲ့ ချေးငွေတွေရယ် မိသားစု စုငွေတွေရယ် ကို အသုံးပြုပြီး Richard တစ်ယောက် Oxford မြို့ မြောက်ဘက် ၅ မိုင် အကွာမှာ တည်ရှိနေတဲ့ Manor အိမ်အိုကြီးကို ဝယ်ယူပြီး စတူဒီယို အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။
Virgin သီချင်းခွေ အရောင်းဆိုင် အနေနဲ့ ကြိုစားဆဲ အနုပညာရှင်တွေ၊ တေးဂီတဝိုင်းတွေ ကို သူတို့ စတူဒီယိုမှာ လာရောက် တီးခတ် အသံသွင်းဖို့ အတွက် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
Richard အနေနဲ့ တေးဂီတနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေ အပြင် အခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များစွာကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှာ ကုမ္ပဏီ ၅၀ ကျော်နဲ့ စုဖွဲ့ထားတဲ့ Virgin စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုကြီးကနေ စုစုပေါင်း အမြတ်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၇ သန်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗွီဒီယို ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချီရေး လုပ်ငန်း အစ အဲကွန်း သန့်ရှင်းရေး လုပ်ငန်း အဆုံး လုပ်ငန်းပေါင်းများစွာ ကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။
၁၉၈၄ ခုနှစ်မှာတော့ သူ့ဘဝ ကို အကြီးမားဆုံး ပြောင်းလဲ ပေးသွားမှာ ဖြစ်တဲ့ လေကြောင်းလိုင်း လုပ်ငန်းလောကထဲကို ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
Branson ကို ယခုလို နာမည်ကျော်ကြားစေတဲ့ နောက်ထပ် အချက်တစ်ချက်ကတော့ “Branded Venture Capital” လို့ အမည်ရပြီး မှတ်သား လေ့လာသင့်တဲ့ စီးပွားရေး နည်းဗျူဟာ တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
“Branded Venture Capital” ဗျူဟာရဲ့ အဓိက သော့ချက်ကတော့ နာမည်ကောင်းရအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်ကောင်းရနေပြီ ဖြစ်တဲ့ Virgin စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံချင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေ ရှိနေပြီ ဖြစ်တာကြောင့် Branson အနေနဲ့ မိမိဝင်ငွေ စိုက်ထုတ်စရာ မလိုပဲ ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာ ကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၉ ခုနှစ်မှာတော့ Richard Branson အနေနဲ့ သူ့ရဲ့ စွန့်ဦးတီထွင်မှုတွေ အတွက် သူရဲကောင်းဘွဲ့ ချီးမြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် Sir Richard Branson ရဲ့ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကို လေ့လာခွင့်ရလိုက်တဲ့ အတွက် ပညာတွေ အများကြီး ရပြီး စာရူ့သူတို့ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Aung Myin Online Learning Page ကနေ နောက်လည်း အခုလို စွန့်ဦးတီထွင်သူများအတွက် ဗဟုသုတ ရစရာများကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားဦးမလို့ စိတ်ပါဝင်စားရင်တော့ Like လုပ်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ စိန်ခေါ်မှု၊ ပြောင်းလဲမှု အသစ်အသစ်တွေ အတွက် အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။
ယနေ့အထိ အသုံးဝင်နေဆဲ ဖြစ်သော Marketing Strategies
အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းဟာဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေစိတ်ဝင်စား အောင်နည်းလမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေလေ့ရှိ ကြပါတယ်။
Marketing ဆိုတာက ဝယ်ယူသုံးစွဲသူတွေကိုရှာဖွေတဲ့ပညာရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ် . . .
ယနေ့ခေတ်လို မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ ခေတ်မှီနည်းပညာတွေဟာ နေ့စဉ်ဘဝကို စိုးမိုးလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အင်တာနက်၊ IT နည်းပညာတွေနဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို ကြော်ငြာတဲ့ Digital Marketing က လုပ်ငန်းရှင်တိုင်း မျက်စိကျလာတဲ့ Marketing နည်းစနစ် တစ်မျိုး ဖြစ်လာပါတယ်။
အဆိုပါ နည်းလမ်းများဟာ ထိရောက်သော်လည်း ယနေ့ ထက်ထိ အသုံးဝင်နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ Traditional Marketing Strategy များကို လည်း မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။
အားလုံး လေ့လာလို့ရအောင် Aung Myin က ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ အခွင့်ကြုံတိုင်း လိပ်စာကဒ်များကို ပေးပါ။
ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ လိပ်စာကဒ်များကို အိမ်နီးချင်းတွေ၊ အခြားလုပ်ငန်းတွေဆီကို ပေးနိုင်သလို Notice Board မှာ ကပ်ထားတာမျိုး စသည်ဖြင့် နည်းမျိုးစုံ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လိပ်စာကဒ်ဆိုတာသေးငယ်တဲ့အရာလေး ဖြစ်ပေမယ့် မိမိ အတွက် အများကြီး အထောက်အကူ ပေးပါတယ်။
၂။ လက်ဆောင် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းများ (သို့) Products များကို ပြိုင်ပွဲမှာ ဆု အဖြစ်ပေးပါ။ လူမှုရေးပွဲတွေမှာ Sponsor ပေးပါ။
မြို့ထဲက အထက်တန်းကျောင်းလေးမှာ လေလံပွဲ ကျင်းပနေပါသလား။ ဆုချီးမြှင့်တဲ့ အလှူပွဲတစ်ခုခု ပြုလုပ်နေပါသလား။ ဆုချီးမြှင့်ပါ . . .
နောက်ပြီး လုူမှုရေးပွဲတစ်ခုခုမှာ ကျွေးမွေး ဧည့်ခံတာပဲလုပ်မယ့်အစား ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ပြီး Sponsor ပေးတာမျိုး လုပ်သင့်ပါတယ်။ non-profit အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနဲ့ ပေါင်းပြီး ရန်ပုံငွေရှာပေးတဲ့ ပွဲမျိုးလည်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းဟာ ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်ရင်းနဲ့ လူအများနဲ့ ရင်းနှီး အောင် ပြုလုပ်ခြင်းတစ်မျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ အနိုင်ရတဲ့သူတွေ၊လာရောက်သူတွေဟာ သင့်ရဲ့ product (သို့) service ကို အသုံးပြုမှာ ဖြစ်ပြီး သူတို့ကနေ အခြားသူများကို ညွှန်းဆိုပေးတာမျိုးလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
လူတွေ လေးစားအထင်ကြီးရတဲ့ brand image ကောင်းတစ်ခုကိုလည်း ဖန်တီးပေးပါတယ်။
၃။ အခွင့်အရေးရတိုင်း ဟောပြောဆွေးနွေးပါ။
သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ပွဲတစ်ခုခုကို ရှာဖွေကာ ပညာပေးနိုင်သော၊ အဓိပ္ပာယ်ရှိသော မိန့်ခွန်းတစ်ခုကို ပြင်ဆင်ဟောပြောပါ။ ထိုကဲ့သို့ပြုလုပ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းတူသူတွေကြားမှာ အထင်ကြီးခံရစေကာ သင့်လုပ်ငန်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အမြင်ကောင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။
၄။ ပုံနှိပ်တိုက်တွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံပါ။
အွန်လိုင်း သတင်းမီဒီယာတွေ အသုံးပြုမှု များပြားလာပေမယ့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုတွေဟာလည်း အလုပ်ဖြစ်နေပါသေးတယ်။ သင့်ရဲ့ဝယ်ယူသူတွေကို ဦးတည်တဲ့ မဂ္ဂဇင်း (သို့) သတင်းစာတွေမှာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေ ထည့်သွငးရေးသားပါ။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာ သင့်လုပ်ငန်းရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ ပွဲအခမ်းအနားတွေ၊ အောင်မြင်မှု မှတ်တိုင်တွေကို ပြသဖို့အတွက် ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၅။ စာပို့စနစ်ကို အသုံးပြုပါ။
Email ပို့နေကြတဲ့ ခေတ်မှာ စာပို့စနစ်ဖြင့် ပေးပို့ခြင်းဟာလည်း နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းတဲ့ marketing နည်းလမ်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ လူတော်တော်များများဟာ အပြင်မှာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ပေးပို့တဲ့အရာမျိုးကို သဘောကျကြပါတယ်။ ကူပွန်တွေ၊ ပစ္စည်းအသစ် ထုတ်တဲ့အကြောင်းတွေ ၊ ပစ္စည်းနမူနာတွေ၊ သတင်းလွှာ အစရှိတာတွေနဲ့ မိမိလုပ်ငန်းကို ကြော်ငြာပေးနိုင်တဲ့ ဘယ်လို အရာတွေကိုမဆို ပေးပို့သင့်ပါတယ်။ ထိုအရာမျိုးဟာ ပိုပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာဆန်တဲ့ ပိုမိုရင်းနှီးတဲ့ ပုံစံကို ပြသတဲ့ Marketing တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ကြိုတင်ချိန်းဆိုမှုမရှိဘဲ သွားရောက်တွေ့ဆုံခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။
သင့်ရဲ့ ဝယ်ယူသူဖြစ်နိုင်ချေရှိသူတွေကို စာရင်းပြုစုပြီး သူတို့ကို ဆက်သွယ်ပါ။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကြိုတင်ချိန်းဆိုမှုမရှိဘဲ ဆက်သွယ်တာမျိုးကို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ အရင်စဉ်းစားပါ။ ပြီးမှ ဆက်သွယ်ပါ။ ဝယ်ယူသူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အချိန်နဲ့ လိုအပ်မှုအပေါ်လိုက်ပြီး မတူညီတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ စကားပြောဆိုပါ။ အဲဒီလိုလုပ်တာဟာ ပုံမှန် အရောင်းပုံစံထက် ပိုပေမယ့် အခြားသော လုပ်ငန်းများနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိင်အောင်၊ ဝယ်ယူသူအသစ်တွေ ရလာအောင် အထောက်အကူပြုပါတယ်။
၇။ ကုန်စည်ပြပွဲများမှာ ပါဝင်ပါ။
ကုန်စည်ပြပွဲတွေဟာ သင့်ကို သင့်ရဲ့ ပြိုင်ဘက်နဲ့ တစ်နေရာတည်းမှာ ရှိနေစေပြီး သူတို့ရဲ့ အရောင်းပုံစံတွေကို လေ့လာနိုင်တဲ့အပြင် Marketing Materials တွေနဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Product တွေကို ပြသပြီး ကုမ္ပဏီကို အရောင်းမြှင့်တင်ဖို့အတွက် အခွင့်ရေးကောင်းတွေကိုလည်း ပေးပါတယ်။ အခြားသော ပညာရှင်များနဲ့လည်း တွေ့ဆုံစေကာ အတူအလုပ်လုပ်ခွင့်တွေကိုလည်း ရရှိစေပါတယ်။
၈။ ထုပ်ပိုးမှုပုံစံ နဲ့ တင်ပြမှု ပုံစံများကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပြုပြင်ပါ။
သင့်ရဲ့ တင်ပြမှုပုံစံကို ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ Brand ကို ပိုမို အားကောင်းလာအောင်လုပ်ပါ။သင့် Product ရဲ့ Branding နဲ့ ဆိုင်ပုံစံ အခင်းအကျင်းစတဲ့ အပြင်ပန်း သွင်ပြင်တွေဟာလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ သင့်အတွက် ဝယ်ယူသူဖြစ်လာနိုင်ချေရှိတဲ့သူတွေကို မှန်ကန်တဲ့ Brand Message ကို မပေးနိုင်တဲ့ အသွင်အပြင်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့လိုပါမယ်။ဒါကြောင့် အမြဲ ပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့အတွက် အချိန်ယူပါ။ ပြောင်းလဲမှု သေးသေးလေးဟာ ကြီးမားတဲ့ ခြားနားချက်တစ်ခုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
၉။အောင်မြင်မှုတွေများအတွက် ဂုဏ်ပြုပွဲတွေ ပြုလုပ်ပေးပါ။
အောင်မြင်မှုတွေကို ဂုဏ်ပြုဖို့အတွက် မိတ်ဆုံစားပွဲလိုမျိုး၊ ပါတီတွေလိုမျိုး ကျင်းပပေးသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ လုပ်ငန်းဟာ အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားဖက်တွေရတာမျိုး၊ ဝန်ဆောင်မှု အသစ်တွေ ထပ်ပြီး မိတ်ဆက်ပေးတာမျိုးရှိလာတဲ့အခါ အများသိစေဖို့အတွက် စာနယ်ဇင်းတွေကိုဖိတ်ပြီး အသိပေးပါ။ ထိုသို့ ကျင်းပတာမျိုးဟာ သင်ဦးတည်တဲ့ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရစေပြီး သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းကို အောင်မြင်အောင် အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ Aung Myin Online Learning Page ကနေ နောက်လည်း အခုလို Marketing နဲ့ ဆိုင်တဲ့ ဗဟုသုတ ရစရာများကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားဦးမှာမို့လို့ စိတ်ပါဝင်စားရင်တော့ Like လုပ်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ပိုကြိုးစားဖို့ မိမိကိုယ်ကို စိတ်ဓာတ်ခွန်အား တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ
သင်ကိုယ်တိုင်က ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုအောင်မြင်ဖို့ ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသိတာနဲ့ တကယ်လက်တွေ့ လုပ်ဆောင်မှုကြားက ကွာဟချက်ကတော့ အတော်လေးကြီးမားနေနိုင်ပါတယ်။
အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဘယ်လိုတွန်းအားပေးမလဲ?
ဒီမေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကောင်းဆုံး အကြံပေးချက်တချို့ကို Aung Myin ကနေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ရည်မှန်းချက်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လုပ်ပါ
သင့်အနေနဲ့ ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေဘဲ အရမ်းပင်ပန်းနေတဲ့ အချိန်ကာလတွေမှာ သင့်ရဲ့စိတ်ဓါတ်အင်အားကို မြှင့်တင်ပေးမယ့်လှည့်ကွက်က အလုပ်တွင်စေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုခု မဟုတ်သလို စိတ်အင်အားဖြည့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုခုလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သင်လုပ်နေတဲ့အရာကို ဘာကြောင့်လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့ကသာ အခရာကျတာပါ။
၂။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဂရုစိုက်ပါ
တစ်ခါတလေကျရင် စိတ်ကပြဿနာမဟုတ်ဘဲ ခန္ဓာကိုယ်က ပြဿနာဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
“သင် မကြာခဏပင်ပန်းနေလား? အိပ်ရေးဝရဲ့လား? အချိန်တိုင်းလိုလိုမှာ ခန္ဓာကိုယ်က ဝေဒနာတစ်ခုခုခံစားနေရလား?”
သင့်ခန္ဓာကိုယ်က ဒီအချက်တွေပြနေပြီဆိုရင် အဲဒီလိုဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပြီး အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပါ။
၃။ စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမမှီခိုဘဲ အကျင့်ပြုလုပ်ပါ
သင်ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒတစ်ခုတည်းနဲ့ တစ်စုံတခုကို ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ဖို့ရာ အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါမှာ အကျင့်ကိုအစွဲပြုပြီးလုပ်တာက ပိုမိုလွယ်ကူပါတယ်။
“သင့်ကို အလုပ်ပိုတွင်စေပြီး စိတ်ကျေနပ်မှုရစေမယ့် အကျင့်လေးတွေနဲ့ စတင်ပါ။ ဥပမာ တစ်နေ့မှာ ၁၅ မိနစ်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုပြီး အကျင့်လုပ်နိုင်သလို အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းကောင်းနဲ့ တစ်ဖြတ်တစ်ဖြတ် အလုပ်လုပ်တာမျိုးတို့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။”
၄။ မပြေလည်မှုကို လက်ခံပါ
စိတ်ဓါတ်ခွန်အားရရှိဖို့ ခက်ခဲနေသူတွေအဖို့ ကာယနည်းပြတွေရဲ့ အနာခံမှ အသာစံရမယ်ဆိုတဲ့ လက်သုံးစကားကို မှတ်မိနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါက လူတကာသုံးနေကျစကားဆိုပေမယ့် သင့်အတွက် အဆင်ပြေတဲ့ဘောင်ကနေ မထွက်ဘဲနဲ့တော့ သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ချဲ့ထွင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် နည်းနည်းလေး အဆင်မပြေဖြစ်သွားတာနဲ့ စိတ်ပျက်အားလျော့မသွားပါနဲ့။
တကယ်တော့ အခက်အခဲနည်းနည်းရှိနေတာဟာ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။
“သင့်အနေနဲ့ ပုံမှန်ထက်ပိုကြိုးစားလုပ်ရမယ့် ဘယ်အရာအတွက်မဆို ပုံမှန်ထက်ပိုလုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ အဲဒါမှပဲ သင်ဟာ နဂိုကနဲ့ လုံးဝကွဲပြားခြားနားပြီး အများကြီးပိုကြံ့ခိုင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာပါ။”
၅။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆုပေး(ဒဏ်ပေး) ပြုလုပ်ပါ
သင့်ရဲ့စိတ်ခွန်အားကို မြှင့်တင်ပေးမယ့် နည်းလမ်းတိုင်းက စိတ်အနေအထားမြင့်မြင့်ထားဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်ဆုပေးဒဏ်ပေးစနစ်ကလည်း သင့်ကိုစိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် ပိုမိုထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် “သင်မငြင်းပယ်နိုင်မယ့် ကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုခု ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပေးပါ”လို့ ကျွမ်းကျင်သူများက အကြံပြုပါတယ်။
“ဥပမာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပြီးအောင်ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် အချိန်တစ်ခုနဲ့ ဆုလာဘ်တစ်ခု သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်က ရေခဲမုန့်ကြိုက်တယ်ဆိုရင် ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါ ရေခဲမုန့်စားရမယ်ဆိုတာမျိုး” ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Aung Myin Online Learning Page ကနေ နောက်လည်း အခုလို အောင်မြင်ဖို့ ကြိုးစားနေသူများအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားရစရာ ဗဟုသုတ ရစရာများကို ဆက်လက်ဖော်ပြပေးသွားဦးမလို့ စိတ်ပါဝင်စားရင်တော့ Like လုပ်ပြီး ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
“အပြောင်းအလဲ” ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့တွေ မလွဲဧကန် ကြုံတွေ့နေရမဲ့အရာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပြောင်းလဲမှုကို ကြီးထွားဖို့ တိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ အခွင့်အလမ်းအနေနဲ့ သုံးတာ မသုံးတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
ဒေါက်တာ စပန်ဆာ ဂျွန်ဆန် ရေးတဲ့ “ငါ့ဒိန်ခဲဘယ်သူရွေ့ခဲ့တာလဲ” ဆိုတဲ့စာအုပ်ဟာ အပြောင်းအလဲကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်ရင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြထားတဲ့ အကောင်းဆုံးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်ဖ် နဲ့ စကာရီလို့ခေါ်တဲ့ ကြွက်ကလေးနှစ်ကောင်ရယ် ဟမ်နဲ့ ဟော ဆိုတဲ့ လူပုလေးနှစ်ယောက်တို့ဟာ ဝင်္ကပါထဲမှာ သူတို့ အသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ စားသောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ ဒိန်ခဲကို လိုက်လံရှာဖွေစားသောက်နေကြပါတယ်။ ဒီပုံပြင်ကို ကျွန်တော်တို့ဘဝနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်တော့ ဒိန်ခဲဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ ကျွန်တော်တို့ လိုအပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကိုု ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေပါပဲ။ ကျန်းမာရေး ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု ၊ အလုပ်အကိုင် ၊ အချစ်ရေး စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိူးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ရှာဖွေနေကြတာတွေဟာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မတူညီကြပါဘူး။ ဝင်္ကပါဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ လိုချင်တာတွေကို လိုက်လံရှာဖွေနေကြတဲ့ နေရာပတ်ဝန်းကျင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နိုင်သလို ကျွန်တော်တို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စနစ်ဖ် ၊ စကာရီ ၊ ဟမ်တို့ ဟောတို့တွေ အပြောင်းအလဲနဲ့ ကြုံတွေ့တဲ့အခါ တုံ့ပြန်ပုံတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ လူသားတွေ အပြောင်းအလဲကို တုံ့ပြန်ပုံသဘာဝတွေနဲ့ ထင်ဟပ်နေပါတယ်။
ကျွန်တာ်တို့တွေဟာ ဟမ်ဆိုတဲ့လူလေးလို အပြောင်းအလဲကို မကြိုက်ဘဲ မသေချာတဲ့ အနာဂတ်ကို တွေးကြောက်နေပြီး မပြောင်းလဲချင်တဲ့သူလား။ ဟော လို အပြောင်းအလဲဆိုတာကြီးကြောင့် ထိတ်လန့်မှုတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှ ဟားတိုက်ပြောင်းလဲမယ့်သူလား။ စနစ်ဖ်လို အပြောင်းအလဲကို အနံ့ခံနိုင်တဲ့သူဖြစ်မလား။ ဒါမှမဟုတ် စကာရီလို အပြောင်းအလဲကို အလျင်အမြန် ချက်ချင်း လက်တွေ့လုပ်ဆောင် ပြောင်းလဲတတ်သူလားဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ရပါလိမ့်မယ်။
အပြောင်းအလဲလုပ်ဖို့ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့တွေအတွက် အလွန်ခက်ခဲပါတယ်။ ဘာကြောင့် အပြောင်းအလဲ မပြုလုပ်နိုင်ကြလဲ။ မသေချာမှုတွေကို ကြောက်လို့ပါ။ နေ နေကျအတိုင်း လုပ်နေကျအတိုင်း ပြောနေကျအတိုင်း ဒီအတိုင်း ကျွန်တော်တို့ ပျော်နေကြတယ်။ နေသာသလိုပဲ နေကြတယ်။ အပြောင်းအလဲဆိုတာကို ကြောက်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြောင်းအလဲဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ ဖန်တီးမယူတောင် ကျွန်တော်တို့ဆီကို သေချာပေါက် ရောက်လာတတ်တဲ့အရာပါ။
အပြောင်းအလဲတွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အပြောင်းအလဲတွေပြုလုပ်ဖို့၊ လက်ခံဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
၁ ။ လူတိုင်း လူတိုင်း အရာတိုင်း အရာတိုင်းဟာ ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေလည်း အပြောင်းအလဲကို လက်ခံရင်ဆိုင်ရပါမယ်။
၂။ အပြောင်းအလဲတွေက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုးတက်မှုအတွက် အလွန်ကောင်းပါတယ်။
၃ ။ ဘဝမှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် အတွေးအခေါ် အကြံအစည်ဟောင်းတွေကို စွန့်လွှတ်ပြီး အသစ်အသစ်တွေကို လက်ခံကျင့်သုံးရပါမယ်။
၄ ။ ပြောင်းလဲမှု လုပ်ရင်တော့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အရာတွေက စောင့်နေပါလိမ့်မယ်။
အပြောင်းအလဲဆိုတာဟာ ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာ အမြဲကြုံတွေ့နေရမယ့် အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒါကို ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ကြမလဲ။
၁။ အပြောင်းအလဲကို လေ့လာစောင့်ကြည့်မှတ်သားနေရပါမယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ ဒိန်ခဲကို အမြဲအနံ့ခံနေပါ။ ဒါမှသာ ဒိန်ခဲက ပုပ်သိုးတော့မလားဆိုတာ သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နေလဲ သိရအောင် ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲသတိထား နေရပါမယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့ comfort zone မှာပဲ နေတတ်ကြပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြောင်းလဲမှုအရိပ်အရောင်လေးတွေကို သတိမထားမိကြပါဘူး။ လောကမှာ မပြောင်းလဲတဲ့အရာဆိုတာ ပြောင်းလဲခြင်းပဲ ရှိတာပါ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘဝမှာ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာလေးမှာပဲ သက်တောင့်သက်သာ မေ့မေ့လျော့လျော့မနေသင့်ဘဲ အပြောင်းအလဲတွေကို အမြဲသတိထားနေရပါမယ်။
၂။ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို ရပ်တန့်ပြီး ပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံး ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကြုံတွေ့နေရမှာပါ။ အဲ့လိုကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့တွေ လက်မခံချင်ကြပါဘူး။ မပြောင်းလဲချင်ကြပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြောင်းလဲလိုက်လို့ ဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကို ကြောက်နေကြလို့ပါ။ အခု ရှိနေကြတဲ့ အနေအထားထက် ပိုဆိုးလာမှာကို ကြောက်နေကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကြောက်ရွံ့နေတဲ့အရာက ကျွန်တော်တို့ ထင်သလောက် ကြောက်စရာမကောင်းပါဘူး။ စိတ်ထဲမှာ ခွင့်ပြုထားတဲ့ ကြောက်စိတ်ဆိုတဲ့အရာကတောင် လက်တွေ့အပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေထက် ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကြောက်ရွံ့မှုကို ကျော်လွန်နိုင်ပြီး စတင်ပြောင်းလဲနိုင်မှသာ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဘဝမှာ စွန့်စားလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့အခါ စွန့်စားရမှာပါ။ ကြောက်ရွံ့မနေသင့်ပါဘူး။
၃။ အပြောင်းအလဲကို မြန်မြန်လုပ်နိုင်ရပါမယ်။
ဒိန်ခဲအဟောင်းတွေကို မြန်မြန်စွန့်ပစ်နိုင်လေလေ ဒိန်ခဲအသစ်တွေကို မြန်မြန်ခံစားနိုင်လေလေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ဘဝမှာ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ လက်လွှတ်သင့်တဲ့အရင်ကအရာတွေကို လက်လွှတ်ရပါလိမ့်မယ်။ အတိတ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး မပြောင်းလဲနိုင်တာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အချိန်တွေ အားအင်တွေကို ဖြုန်းတီးနေတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဘဝရဲ့ တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ အချိန်တွေ အားအင်တွေကို ဖြစ်လာတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေကို လက်ခံပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုရပါမယ်။ အပြောင်းအလဲဆိုတဲ့အရာကို ကိုယ့်အတွက် တိုးတတ်ဖို့ ကြီးထွားဖို့အတွက် အခွင့်အရေးတစ်ခုလို့မြင်ပြီး မြန်မြန်ပြောင်းလဲနိုင်ရင် ဒိန်ခဲအသစ်တွေက စောင့်ကြိုနေမှာ အသေအချာပါပဲ။
ဒါကြောင့် အပြောင်းအလဲကို ပွေ့ဖက်ပြီး ခံစားလိုက်ပါ။
ဒီလို ဗဟုသုတရတဲ့ စာတွေကို ဖတ်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Page လေးကို Like and see first လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။